IPixelmator Pro ngentengo uhhafu wesikhathi esinqunyelwe | Ngivela kwa-mac
IPixelmator Pro ngentengo uhhafu wesikhathi esilinganiselwe
Isikhathi esihle sonyaka sokuthenga isoftware siphakathi koLwesihlanu Omnyama, izinsuku ezimbalwa abanye onjiniyela abasebenzisa ngokunenzuzo ukwehlisa intengo yezicelo zabo bese besebenzisa isikhathi lapho wonke umuntu uphethe ikhadi lesikweletu.
Esinye isikhathi esihle sokuthenga isoftware ngesikhathi sikaKhisimusi, esinye isikhathi semali engalawulwa esetshenziswa yilo mphakathi ukuheha amakhasimende amasha. Ngalo mqondo, abafana abavela kuPixelmator, basanda kukhipha isipho sakho ngoKhisimusi ngokusika intengo yohlelo lokusebenza ngesigamu.
Ngalesi saphulelo, Intengo yePixelmator Pro ihlala kuma-euro angu-21,99, isipho sokuthi, uma ngikhumbula kahle, lo njiniyela owenza ngalesi sikhathi, ngakho-ke uma ubulokhu ufuna ukuzama lolu hlelo lokusebenza futhi ubeke eceleni leyo nguqulo engekho emthethweni ye-Photoshop, manje yisikhathi esihle.
Lokhu kunikezwa kuzotholakala amasonto amathathu alandelayo, ngakho-ke unesikhathi esanele sokucabanga ngaso kaningi uma kufanele ngempela noma cha (impendulo inguyebo, ngaphandle kokungabaza). Uma ungabaza, kungukuthi awudingi lolu hlelo.
Omunye wemisebenzi ethakazelisa kakhulu yalolu hlelo lokusebenza, futhi etholakala enguqulweni ye-iOS, ngumsebenzi we-ML Super Resolution, umsebenzi osebenzisa ukufunda komshini khulisa ukulungiswa kwesithombe ngenkathi ugcina ubukhali ngaso sonke isikhathi, njengamafilimu abaseshi, lapho iminyaka eminingi, benalolu hlobo lwesoftware ... (qaphela okungaqondakali).
Ukusizakala ngalokhu kunikezwa, kufanele nje uye ku-Mac App Store noma uchofoze kusithonjana sohlelo lokusebenza engisishiya ekugcineni kwalesi sihloko, uhlelo lokusebenza olusanda kwenziwa kuvuselelwe ukusebenzisana ne-Apple Silicon.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » IPixelmator Pro ngentengo uhhafu wesikhathi esilinganiselwe
Lokhu ukubuyekezwa kokuqala kwe-AirPods Max
I-Dark Matter izofakwa njengochungechunge olusha ku-Apple TV +